Thursday November 02, 2017 - 15:45:32 in Wararka by Super Admin
24-kii saac ee lasoo dhaafay warbaahinta ku hadasha Afka Dowladda Federaalka iyo kuwa kale oo taageera ayaa faafinayay warar sheegayay in Kumanaan katirsan ciidamada Xabashida Itoobiya ay gudaha usoo galeen dalka Soomaaliya ayna duullaan ku yihiim wi
24-kii saac ee lasoo dhaafay warbaahinta ku hadasha Afka Dowladda Federaalka iyo kuwa kale oo taageera ayaa faafinayay warar sheegayay in Kumanaan katirsan ciidamada Xabashida Itoobiya ay gudaha usoo galeen dalka Soomaaliya ayna duullaan ku yihiim wilaayaatka islaamiga ah.
SomaliMeMo ayaa durbadiiba xiriiro kala duwan la sameysay dad ku sugan gobolka Gedo ee dalka Soomaaliya si aan u ogaanno waxa kajira in Ciidamo Itoobiyaan ah ay kusoo qulqulayaan deegaanno Gedo katirsan iyagoo duullaan ah.
Ugu horrayn majiraan wax dhaq dhaqaaq duullaan ah oo ciidamada Xabashida Itoobiya ay ka wadaan gobolka Gedo iyo gobollada ku dhow sida aan ku helnay xog baaris rasmi ah oo aan sameynay, shalay ayay degmada Luuq kasoo gudbeen 12 gaari oo u badan kuwa xamuulka oo ay la socdaan ciidamo ilaala u ah gaadiidkaas.
Ciidamadaasi ka yimid dhanka Luuq ayaa maanta barqadii waxay gaareen garoonka diyaaradaha magaalada Baydhabo halkaas oo uu kuyaal saldhigga ugu weyn ee ciidamada Itoobiya ku leeyihiin Soomaaliya.
Waxa Baydhabo soo gaaray ee dhanka Doolow iyo Luuq ka yimid ma ahan ciidan kun askari gaaraya ee waa ciidan tira yar oo gelbinayay sahay ku wajahneed melleteriga Baydhabo ku sugan.
Waxaan xiriiro kala duwan la sameynay jihooyinka uu arrinkaas khuseeyo waxaana xiriiradaas aan ku ogaanay in aysan jirin haba yaraatee wax dhaq dhaqaaq melleteri ah oo ay wadaan ciidanka gumeysiga Itoobiya.
SomaliMeMo waxay la xiriirtay saraakiil katirsan wilaayaatka islaamiga Gedo iyo Bay iyo Bakool waxayna dhammaantood xaqiijiyeen in aysan jirin ciidamo duullaan ah oo xuduud beenaadka kasoo gudbay arrinkaas oo waxba kama jiraan ka dhigaya wararkii laysla dhaxmarayay ee warbaahinta Afka Soomaaliga ku hadasha baahinaysay.
Dhammaan wilaayaatka islaamiga ah wax dhaq dhaqaaq melleteri ah lagamasoo sheegin waxaana xusid mudan in ciidamada Itoobiya ay xaalad go’doomin adag ah ku wajahayaan magaalooyin ay kamid yihiin Halgan, Xudur,Waajid,Qansaxdheere iyo Diinsoor.
Magaalooyinkaas aan soo sheegnay saadka melleteriga Itoobiya dhanka dhulka ma mari karo waxayna badanaa adeegsadaan diyaaradaha UN-ka balse marmarka qaar ayay ciidamo kumanaan ah soo uruuriyaan waxayna dagaal ugalaan in ay saadka isku gudbiyaan.
Halkee ku dambeeyay warkii ahaa Leego Itoobiyaan ayaa usoo socda?.
Bishii Augst,2017 markii ay ciidamada Shabaabul Mujaahidiin qabsadeen Deegaanka Leego ayay warbaahinta dhuuni raaca ah waxay suuqa soo geliyeen war ah "Kumanaan Ciidamo Itoobiyaan ah oo kusoo wajahan deegaanka Leego si ay Al Shabaab uga qabsadaan”, illaa iyo hadda Leego waa xur Itoobiyaan iyo Uganda midna kuma sugna waxaana muuqata in warkan cusubna uu kaas lamid yahay.
Leego laba Bilood iyo maalmo waxaa ka shaqeynaya maamul islaami ah oo dadka deegaanku ku qanacsanyihiin, arrintan ayaa wajiga ka feydaysa kuwa dabadhilfyada ah ee xabashida Afka ugu qabanaya dalka.
Ujeedka faafinta warkan laga leeyahay Maxay tahay?.
Sida Muuqata warbaahinta qaar ayaa dagaal toos kujirta oo lasafan dowladaha ciidamadoodu kusoo duuleen dalka halka kuwa kale ay iska yihiin haya raac aan hubsan waxa ay umadda ugudbinayaan.
Tan iyo markii Farmaajo uu iclaamiyay dagaalka ka dhanka ah Xarakada Al Shabaab waxaa sii badanayay dacaayadda ay Dowladdu ku faafinayso bulshada dhaxdeeda balse arrinkaas ayaan waxba usoo kordhin , soomaalidu waxay tiraahdaa "Beenu Raad maleh”.
Socdaalkii uu Farmaajo ku tagay magaalooyinka Addis Ababa iyo Kampala wax sidaas uweyn sooma kordhin oo isaga ayaaba qiran in ciidamada dowladahaas aysan Al Shabaab ka adkaan karin, waxaana la saadaalinayaa in haddii ciidamada Itoobiya iyo AMISOM duullaan hor leh ku qaadayaan wilaayaatka islaamiga ah aysan u baahnayn ciidamo dheeraad ah oo waxay awoodaan in ay dhaq dhaqaaq ku amraan ciidamadooda kumanaanka ah ee ku go’doonsan magaalooyinka gumeysiga kujira.
Shaki kuma jiro in ay jiraan dhinacyo badan oo maskax iyo maal ku bixinaya sidii ay umadda Soomaaliyeed cabsi gelin iyo rucbi ugu beeri lahaayeen sida ay niyadda uga dilaan balse umaddu ma wada dhimane waxay heysataa warbaahin islaami ah oo xaqiiqda banaanka soo dhigaysa.